'Tomb Raider' နှင့် 'Tomb Raider: Underworld' စျေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်အတွင်း | ငါက Mac ပါ
'Tomb Raider' နှင့် 'Tomb Raider: Underworld' ဈေးနှုန်းကအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာကျဆင်းတယ်
အဆိုပါအံ့မခန်းဂိမ်း 'သင်္ချိုင်းဖောက်သူ' y 'Tomb Raider: Underworld'အလွန်အမင်းကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်သာ၎င်းတို့ကိုလျှော့ချနိုင်သည် € 14,99 y € 9,99 အသီးသီး။ ဂိမ်းများကိုအများအားဖြင့်ယူရို ၂၉.၉၉ နှင့်ယူရို ၁၉.၉၉ အသီးသီးဖြင့်ရောင်းချလေ့ရှိသဖြင့်လျှော့စျေးသည်သိသာထင်ရှားသည်။ နှစ်ခုဂိမ်းများကိုဖြစ်ကြသည် လုံးဝစပိန်ဘာသာ, နှင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂိမ်းအကြီးရှိပါတယ်။
မဝယ်ခင် နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုကြည့်ပါ သင်၏ကစားပွဲ၌ကစားရန်သင်ဘာလိုအပ်သနည်း မက်ဒေါင်းလုပ်ချတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ထားသော Mac App Store သို့လင့်ခ်များမှတစ်ဆင့်သင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ဖော်ပြချက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ပထမ ဦး ဆုံး၌ 'သင်္ချိုင်းဖောက်သူ' ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Lara Croft သည်လေ့လာရေးခရီးကိုစတင်ရန်ရှိသည် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာအောက်၌နစ်မြုပ်နေသောကမ္ဘာကြီးကိုရှာပါ။ ထိုင်းကမ်းခြေ၏ကြည်လင်သောကြည်လင်သောရေမှ စ၍ မက္ကဆီကို၏တောတွင်းများအထိ Lara သည်နစ်မြုပ်နေသောကမ္ဘာသို့လျှို့ဝှက်တံခါးများမဖွင့်မချင်းမရပ်နိုင်ပါ။ ၏ဂိမ်းထဲမှာ 'Tomb Raider: Underworld' လူငယ်နှင့်တော်တော်လေး Lara Croft, သဲကန္တာရကျွန်းပေါ်တွင်သင်္ဘောပျက်, မိမိတစ်ခုတည်းသောလက်နက်အဖြစ်သူ၏ဗီဇနှင့်အတူသူ၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဘို့အရန်ပွဲစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။ Lara ဟာသူမရဲ့သဘာဝလက်ဆောင်တွေကိုစုံလင်အောင်ကူညီဖို့လိုလိမ့်မယ်၊ သူမသူငယ်ချင်းတွေကိုကယ်တင်ဖို့နဲ့ကျွန်းရဲ့သွေးထွက်သံယိုနေထိုင်သူတွေဆီကနေလွတ်မြောက်ဖို့သူအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခရီးကိုသွားနေစဉ်။ ပျော်စရာအာမခံချက်ရှိပေမယ့်ဂိမ်းများမဝယ်ခင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ မက် နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံ။
'၏ဂိမ်းကိုဝယ်ပါTomb Raiderတိုက်ရိုက်ကနေ Mac က App Store ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ။
'၏ဂိမ်းကိုဝယ်ပါTomb Raider: Underworldတိုက်ရိုက်ကနေ Mac က App Store ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » 'Tomb Raider' နှင့် 'Tomb Raider: Underworld' ဈေးနှုန်းကအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာကျဆင်းတယ်
mac နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သောဂိမ်း controller ကိုရှိပါသလား ??? ငါအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Cristian Ruiz-Santillan ဟုသူကပြောသည်
Mac အတွက် Tomb Raider Rise of တဲ့အခါမှာ ??
Cristian Ruiz-Santillan အားပြန်ပြောပါ
HD Video Converter Pro သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်
၁၂ လက်မ MacBook အသစ်အကြောင်းသင်မသိသောအချက် ၅ ချက်